ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gavin Newsom Democratic Party (United States)
ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Eleni Kounalakis Democratic Party (United States)
အဲလက်စ် Padilla (D)
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ဒေသရင်း သီးသန့်ဖြစ်သော မျိုးစိတ် အမြောက်အမြား ရှိပြီး အခြားနေရာများတွင် သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သော ကမ္ဘာဦးအစ မျိုးစိတ်များလည်း ပါဝင်ကာ ကက်တလီနား အိုင်ရွန်းဝုဒ် (Lyonothamnus floribundus) အစရှိသော အပင်များ ဖြစ်သည်။ အခြားသော ဒေသရင်းသီးသန့် မျိုးစိတ်များမှာ မျိုးကွဲထွက်ခြင်း နှင့် နေရာဒေသကိုလိုက်၍ အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း အားဖြင့် အစပြုခဲ့ကြပြီး မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးတို့မှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် တစ်ခုတည်း ဖြစ်သော်လည်း ကယ်လီဖိုးနီးယား လီလက် (Ceanothus) အစရှိသော အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသော ဂေဟစနစ် အခြေအနေများကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကြသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ ဒေသရင်း မျိုးစိတ်များမှာ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စားကျက်မြေ အလွန်အကျွံ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ တည်ရှိရာဒေသအတွင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကြသည့် သူစိမ်းမျိုးစိတ်များ ရောက်ရှိလာခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် ဒေသရင်းအပင်များ စုစည်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ အဆင့်မြင့်မှုကို ဝင့်ကြွားရသော ဒေသဖြစ်ကာ အကြီးဆုံး သစ်ပင်၊ အမြင့်ဆုံး သစ်ပင် နှင့် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး သစ်ပင် စသည်တို့ ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ ဒေသရင်း မြက်များမှာ နှစ်ရှည်ပင်များ ဖြစ်သည်။ ဥရောပသားတို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ၎င်းတို့နေရာတွင် ကျူးကျော်လာသည့် မျိုးစိတ်များဖြစ်သည့် ဥရောပ၏ တစ်နှစ်တာမြက်ပင်များ အစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့သဖြင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ကယ်လီဖိုနီးယား၏ တောင်ကုန်းများသည် နွေရာသီတွင် ရွှေညိုရောင် အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားလေ့ ရှိသည်။ 
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်များ ကျယ်ပြန့်စွာ ကွဲပြားခြားနားပြီး ပြည်နယ်တွင်း သက်ရှိဇုန် ၆ ခု ရှိကာ ၎င်းတို့မှာ ဆိုနိရန်ကန္တာရ ၊ ဆိုနိုရန် အမြင့်ပိုင်း (တောင်ကုန်းနိမ့် ဒေသနှင့် အချို့သော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ) ၊ အပြောင်းအလဲ (ကမ်းရိုးတန်းဒေသနှင့် စိုစွတ်သော အရှေ့မြောက်ကောင်တီများ) နှင့် ပြည်နယ်၏ အမြင့်ဆုံး အပိုင်းများ ဖြစ်သော ကနေဒီယန်၊ ဟတ်ဒ်ဆိုနီယန် နှင့် အာတိတ်ဇုန်တို့ ဖြစ်သည်။ 
ကယ်လီဖိုးနီးယား ယောရှုပင်အရပ်ရှိ ယောရှုပင်
အနိမ့်ပိုင်း ဆိုနိုရန်ဇုန် အတွင်းရှိ ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုရှိသော ဒေသတွင် ရှိသော အပင်များမှာ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသော ဒေသခံ မိုးခေါင်ရေရှားဆူးပင်များ၊ မက်စကွိုက်ပင်များ နှင့် ပါလိုဗာဒီပင်များ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ယောရှုပင်များကို မိုဟာဗီ ကန္တာရအတွင်းတွင် တွေ့ ရသည်။ ပန်းပွင့်သော အပင်များတွင် မှင်စာကန္တာရဘိန်းပင် နှင့် အမျိုးမျိုးသော မေမြို့ပန်းပင်များ ဖြစ်ကြသည်။ အလယ်ပိုင်း တောင်ကြားတွင် ဖရီးမောင့် ကော်တွန်ဝုဒ် နှင့် တောင်ကြားဝက်သစ်ချပင်များ အများအပြား ပေါက်ရောက်ကြသည်။ ဆိုနိုရန် အမြင့်ပိုင်းဇုန်တွင် ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်း ခါးပတ်များ ပါဝင်ပြီး ချုံအငယ်စားများ၊ အပင်ပုလေးများ နှင့် ဆေးဘက်ဝင်သယောင် ထင်ရသော အပင်များ သစ်တော အဖြစ် ပေါက်ရောက်နေကြသည်။ နီမိုဖေးလား၊ ပူရှိန်း၊ ဖာစီလီးယား၊ ဗွိုင်အိုလာ နှင့် ပြည်နယ် အထိမ်းအမှတ် အပင်ဖြစ်သော ကယ်လီဖိုးနီးယားဘိန်းပင် တို့လည်း ထိုဇုန်အတွင်း အများအပြား ပေါက်ရောက်နေကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားနေရာများတွင် ရှိသည့် မျိုးစိတ်များထက် ပိုများသော လူပိုင်းပင် မျိုးစိတ်များလည်း ပေါက်ရောက်လျှက် ရှိသည်။
အပြောင်းအလဲဇုန်တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ သစ်တော အများဆုံး ရှိပြီး သစ်နီပင်(Sequoia sempervirens) နှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး သက်ရှိများတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော "သစ်ပင်ကြီး" သို့မဟုတ် ဧရာမ ဆီကွိုင်းယားပင်(endron Sequoiadgiganteum) (အချို့က အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း ၄,၀၀၀ ခန့်အထိ ရှိပြီဟု ဆိုကြသည်။) များ ပေါက်ရောက်ကြသည်။ တန်ဘာ့ခ် ဝက်သစ်ချပင်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား လော်ရယ်ပင်၊ သကြားထင်းရှူးပင်၊ မာဒရိုနာပင်၊ အရွက်ကြီး မေပယ်လ်ပင် နှင့် ဒေါက်ဂလပ် ထင်းရှူးပင်များလည်း ပေါက်ရောက်ကြသည်။ သစ်တောများ၏ အခြေတွင် ဆွာ့ဒ်ဖန်၊ အလမ်ရု၊ ဘယ်ရန်ဝေါ့ နှင့် ထရီလီယမ်ပင်များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေပြီး ဟက်ကယ်ဘယ်ရီ၊ အဇလီယာ၊ အဲလ်ဒါး နှင့် ကားရန့်ပင်ရိုင်း ချုံပုတ်များလည်း ရှိသည်။ ပန်းရိုင်းပင်များတွင် အမျိုးမျိုးသော မာရီပိုဆာ၊ တျူးလစ်၊ ကျားလီလီ နှင့် ကျားသစ်လီလီပင်များ ပါဝင်သည်။ 
ကနေဒီယန်ဇုန် အမြင့်ပိုင်းများတွင် ဂျက်ဖရီထင်းရှူးပင်၊ ထင်းရှူးနီပင် နှင့် လော့ဂျ်ပိုးထင်းရူးပင်များ အများအပြား ပေါက်ရောက်ကြသည်။ အကိုင်းသေး သစ်ပင်များ ပေါက်ရောက်ရာဒေသများတွင် မန်ဇနီတာ နှင့် စီယာနိုးသပ်စ် အပင်သေးများ၊ တသီးတခြားဖြစ်သော ဆီးရား ပါ့ဖ်ဘောများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ သစ်ပင်ကြီးများ၏ အောက်ကပ်လျှက်တွင် ဟတ်ဒ်ဆိုနီယန် ဇုံ ရှိပြီး အခေါက်ဖြူ၊ မြေခွေးမြီး နှင့် ငွေ ထင်ရှူးပင်များ ပေါက်ရောက်ကြသည်။ ၁၀,၅၀၀ ပေ (၃,၂၀၀ မီတာ) တွင် အာတိတ်ဇုန် စတင်ပြီး သစ်ပင်များ မရှိဘဲ ၎င်း၏ ဒေသရင်းပင်များတွင် ပန်းရိုင်းများ ပါဝင်ကာ ဆီးရား ပရင်းရို့စ်၊ ကိုလမ်ဘိုင်း အဝါရောင်၊ အယ်လ်ပိုင်း ဘတ်တာကပ် နှင့် အယ်လ်ပိုင်း ရှုတင်းစတား တို့ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
ရက်ဒ်ဝုဒ်အမျိုးသားဥယျာဉ် ရှိ သစ်နီပင်အုပ်
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ California Gross domestic product (GDP) (millions of current dollars)။ U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis။
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ Introduction။ National Park Service။
↑ ၃၈.၀ ၃၈.၁ Billington၊ Ray Allen; Ridge၊ Martin (2001)။ Westward Expansion: A History of the American Frontier။ University of New Mexico Press။ p. 203။ ISBN 978-0-8263-1981-4။ February 16, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ California Gold Rush, 1848–1864။ 27 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၇.၀ ၆၇.၁ Bill Watkins။ "How California Lost its Mojo"၊ October 10, 2012။
↑ Rosa Maria Moller (May 2008)။ Aerospace States' Incentives to Attract The Industry 24–25။ California Research Bureau။ 24 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ David Elstein (May 2004). "Restoring California's Native Grasses". Agricultural Research Magazine 52 (5).
↑ The California Invasive Species List။ iscc.ca.gov (California Invasive Species Advisory Committee) (April 21, 2010)။
↑ ၁၀၈.၀ ၁၀၈.၁ ၁၀၈.၂ California: flora and fauna။ city-data.com (2010)။
↑ Sequoia sempervirens (D. Don) Endl။ fed.us (U.S. Forest Service)။
↑ Life Zones of the Central Sierra Nevada။ sierrahistorical.org။ 1 March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်&oldid=745654" မှ ရယူရန်
၂ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၁:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၁:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။